Jigjigay ka Joog oo Nimaan kuu Furi doonin Yuusan Awrka kuu Rarin. | ogaden24
Jigjigay ka Joog oo Nimaan kuu Furi doonin Yuusan Awrka kuu Rarin.
Nov 26, 2018 - Aragtiyood
Ugu Horayn Ilaahay Ha u Naxariisto Wiilkeenii dhalinyarada ahaa ee ku Qadar Jabay Ficilkii ay soo maleegeen Kooxda aynu Garanayno ee Jecel inay nolol Aduun ka sameeyaan Qas iyo fawdo Qabyaalad kusalaysan iyo Tola’ayeey.
Ehelka Qaraabada Asxaabta iyo dhamaan Ummada Somaali State ee uu ka baxay marxuumkuna waxaan leenahay samir iyo iimaan saadaqa Allaha inaga wada siiyo, isaga Rabbi Naxariistii Jano Ha ugu deeqo Hana kadhigi marti Lajecel yahay Aamiin.
Intaa kadib Kuwa caadaystay Tumitaanka Durbaanka colaadeed ee dhiilada xambaarsan waxaa Hubaala, inayna marnaba diyaar u ahayn la noolaanshaha duruufaha Qalafsan ee shacabkeena wadar ahaan u Haleelay, waxayna u arkaan inay dantooda ku Gaadhi karaan Qayla dhaanta Qabiilka Qasaare kaste Haka dhashee.
Kooxdan intooda badan Qurbaha ayey nolol ku haystaan Jigjiga iyo dadka karaamada leh ee kudhex nool na waxay la damacsan yihiin Hoog iyo Haydaar aan dhamaad lahayn, saacadaha dhibaatadana wayba ugu darartaa oo waa siday rabeen waxayna sii Laba Jibaaraan Waa Wareeyda Afka Baarkiisa ah, waxaya dadaal usii Galaan sii socoshada masiiba kaste si ugu dambays wax uun ugu soo dhacaan.
Kooxdani danleyda ah waxay ogsoon yihiin inay Haystaan Dhul Nabada oo siday rabaan ay ugu ku noolaayaan, sidoo kalana ay u carari karaan markasta oo ay dareemaan in yar oo khatar ah, shakhsiyaadka noocaas ah waxay dadka iska dhibaataysan ee Nolol maal-meedka Ladaalaa-dhacaya u maleegayaan shirqoolo waaweyn oo Halaag iyo Hoog u Horseedi kara Ummadan daalan.
Marka Laga yimaado kooxahaasi Qurba Joogta ah waxaa jira Koox kale oo Qayb ka ah dhiaabto kaste oo dhacda kooxdaasi waxay xilal sare kahayay xukuumada madaxwayne Cagjar, sidoo kale waxay kujiraan masuuliyiinta Hay’adaha Amniga, mamulka Gobolka iyo Kan degmada Jigjiga.
Masuuliyiintaasi kala Heerka ah waxay si dhab ah u wada shaqaystaan kooxaha Qurba Joogta ah waxayna iska dhaadhiciyeen inay iyagu Jigjiga leeyihiin, wax kaste oo ay Rabaana ay kasamayn karaan xukuumadana ay ku khasban tahay inay fuliso danahooda Gaarka ah hadii kale ay soo kicinayaan dhalinyarada Qabyaalada lagu Abaabulay.
Hadaba si looga Hortago dhibaato dambe oo dhiig ku daato waxaa xukuumada madaxwayne Mustaf Lagudboon inay mas’uuliyiinta dawladda ee abaabulka qaybta ka ah, dabadana kariixaya dhalinyarada kuna dhiirigalinaya inay dhagax ku weeraraan Hay’adaha amniga, waa in lagu sameeyo baadhitaano rasmi ah cid kaste oo ku Lug-yeelata Qaska Jigjigana sharciga Lahor-keeno iyadoo aan wax Tix-galin ah Lasiinayn, Hadii kale waxaa Hubaala in maalin ba Mashaqa Hor leh kici doonto xaalkuna meesha uu Haatan Joogo meel kaxun uu Gaadhi doono.